Hapana Chinga“tiparadzanisa Norudo rwaMwari”—Kukosha Kwatinoita Zvechokwadi | Swedera Pedyo
1. Manzwiro api asina kunaka anotambudza vanhu vakawanda, kusanganisira vamwe vaKristu vechokwadi?
JEHOVHA Mwari anokuda iwe pachako here? Vamwe vanobvuma kuti Mwari anoda vanhu vose zvavo, seizvo Johani 3:16 inotaura. Asi vanozonzwa sokuti: ‘Mwari haangambondidi ini sezvandiri.’ Kunyange vaKristu vechokwadi vanganzwa kusava nechokwadi panhau iyoyo panguva nenguva. Aora mwoyo, mumwe murume akati: “Ndinoona zvakaoma kwazvo kudavira kuti Mwari ane hanya neni.” Unombotambudzwawo nokusava nechokwadi kwakadaro pane dzimwe nguva here?
2, 3. Ndiani anoda kuti tifunge kuti hatina maturo kana kuti hatidiwi naJehovha, uye tingakurira sei mafungiro akadaro?
2 Satani anoda kwazvo kuti tidavire kuti Jehovha Mwari haatidi uye haatikoshesi. Chokwadi, Satani anowanzonyengedza vanhu nokuvakurudzira kuzvikudza nokudada. (2 VaKorinde 11:3) Asi anofarirawo kuparadza kuzviremekedza kwevanhu vakaderera. (Johani 7:47-49; 8:13, 44) Izvi zvakadaro kunyanya ‘mumazuva ano okupedzisira.’ Vazhinji nhasi vanokurira mumhuri musina “rudo kwazvo rwokuzvarwa narwo.” Vamwe vanongogara vachisangana nevanhu vanotyisa, vane udyire, uye vakaoma musoro. (2 Timoti 3:1-5) Makore akawanda avakapedza vachibatwa zvisina kunaka, vachiitirwa rusarura, kana kuti vachivengwa angave akaita kuti vakadaro vafunge kuti havana maturo kana kuti havadiwi.
3 Kana ukanzwa kuti wave nemanzwiro akadaro asina kunaka usaora mwoyo. Vazhinji vedu dzimwe nguva tinombozviomesera zvisina musoro. Asi yeuka, Shoko raMwari rakagadzirirwa “kururamisa zvinhu” uye kuti ri“putse zvinhu zvakachererwa zvakasimba.” (2 Timoti 3:16; 2 VaKorinde 10:4) Bhaibheri rinoti: “Tichasimbisa mwoyo yedu pamberi pake pamusoro pezvinhu zvose mwoyo yedu ingatipa mhosva mazviri, nokuti Mwari mukuru kune mwoyo yedu uye anoziva zvinhu zvose.” (1 Johani 3:19, 20) Ngationei nzira ina idzo Magwaro anotibatsira nadzo ku“simbisa mwoyo yedu” nezverudo rwaJehovha.
4, 5. Mufananidzo waJesu weshiri duku unoratidza sei kuti tinokosha mumeso aJehovha?
4 Kutanga, Bhaibheri rinodzidzisa zvakananga kuti Mwari anoona mushumiri wake mumwe nomumwe seanokosha. Somuenzaniso Jesu akati: “Shiri duku mbiri hadzitengeswi nemari inokosha zvishoma here? Asi hapana imwe yadzo ingawira pasi Baba venyu vasingazivi. Asi bvudzi romusoro wenyu chairo rakaverengwa rose. Naizvozvo musatya: munokosha kupfuura shiri duku dzakawanda.” (Mateu 10:29-31) Funga kuti mashoko iwayo airevei kuvateereri vaJesu vomuzana remakore rokutanga.
“Munokosha kupfuura shiri duku dzakawanda”
5 Zvingatishamisa kuti munhu aizotenga shiri duku yei. Muzuva raJesu shiri duku iyoyo ndiyo yakanga yakachipa pashiri dzokudya dzose dzaitengeswa. Cherechedza kuti pamari imwe inokosha zvishoma, mutengi aiwana shiri duku mbiri. Asi Jesu akazotaura gare gare kuti kana munhu aida kubhadhara mari mbiri, aisawana shiri duku ina, asi shanu. Shiri yebhasera yaiwedzerwa sokunge yakanga isingakoshi zvachose. Pamwe zvisikwa zvakadai zvakanga zvisingakoshi mumeso evanhu, asi Musiki aizviona sei? Jesu akati: “Asi hapana neimwe yadzo [kunyange yebhasera] inokanganwika pamberi paMwari.” (Ruka 12:6, 7) Pamwe iye zvino tingatanga kuona pfungwa yaJesu. Kana Jehovha achikoshesa shiri duku imwe zvakadaro, munhu anofanira kuva achitokosha zvakakura chaizvo! Sokutsanangura kwakaita Jesu, Jehovha anoziva zvose pamusoro pedu. Chokwadi, bvudzi romusoro wedu chairo rakaverengwa!
6. Nei tine chokwadi chokuti Jesu aitaura zvinobvira paakataura nezvokuti bvudzi romusoro wedu rakaverengwa?
6 Bvudzi redu rakaverengwa? Vamwe vangafungidzira kuti Jesu akanga ari kutaura zvisingaiti pano. Zvisinei, imbofunga nezvetariro yorumuko. Jehovha anofanira kutiziva zvakakwana zvikuru kuti atisike patsva! Anotikoshesa zvakakwana zvokuti anoyeuka zvose kusanganisira zvatakatodza kuvabereki vedu nendangariro dzezvakaitika kwemakore. * Kuverenga bvudzi redu—iwo musoro mumwe chete uchikura bvudzi rinenge 100 000—raizova basa riri nyore kana tichienzanisa.
Jehovha Anoonei Matiri?
7, 8. (a) Unhu hworudzii uhwo Jehovha anofara kuwana sezvaanenge achinzvera mwoyo yevanhu? (b) Ndeapi mamwe emabasa atinoita ayo Jehovha anokoshesa?
7 Chechipiri, Bhaibheri rinotidzidzisa zvinokosheswa naJehovha muvashumiri vake. Kungotaura zvazviri, anofarira unhu hwedu hwakanaka nokuedza kwatinoita. Mambo Dhavhidhi akaudza mwanakomana wake Soromoni kuti: “Jehovha unonzvera mwoyo yose, unonzwisisa ndangariro dzose dzemifungo.” (1 Makoronike 28:9) Mwari sezvaanonzvera mabhiriyoni emwoyo yevanhu munyika ino izere nechisimba uye ruvengo, anofanira kufara chaizvo kana akawana mwoyo unoda rugare, chokwadi uye kururama! Chii chinoitika kana Mwari akawana mwoyo unomuda zvikuru, unoda kudzidza nezvake pamwe nokupawo vamwe zivo yakadaro? Jehovha anotiudza kuti anocherechedza avo vanotaurira vamwe nezvake. Anotova ne“bhuku yokurangaridza” nokuda kwevose “vanotya Jehovha, vachirangarira zita rake.” (Maraki 3:16) Unhu hwakadaro hunokosha kwaari.
8 Ndeapi mamwe mabasa akanaka ayo Jehovha anokoshesa? Chokwadi, kuedza kwedu kutevedzera Mwanakomana wake, Jesu Kristu. (1 Petro 2:21) Rimwe basa rinokosha iro Jehovha anokoshesa nderokuparadzira mashoko akanaka oUmambo hwake. Pana VaRoma 10:15, tinoverenga kuti: “Dzakanaka sei tsoka dzeavo vanozivisa mashoko akanaka ezvinhu zvakanaka!” Kazhinji tingasafunga nezvetsoka dzedu dzakaderera se“dzakanaka,” kana kuti dzine runako. Asi pano dzinomirira zvinoitwa nevashumiri vaJehovha mukuparidza mashoko akanaka. Kuedza kwose kwakadaro kwakanaka uye kunokosha mumeso ake.—Mateu 24:14; 28:19, 20.
9, 10. (a) Nei tingagona kuva nechokwadi chokuti Jehovha anokoshesa kutsungirira kwedu mukutarisana nezvakaoma zvakasiyana-siyana? (b) Jehovha haambovi nemaonero api asina kunaka pamusoro pevashumiri vake vakatendeka?
9 Jehovha anokoshesawo kutsungirira kwedu. (Mateu 24:13) Yeuka, Satani anoda kuti urambe Jehovha. Zuva rimwe nerimwe raunoramba wakavimbika kuna Jehovha nderimwe zuva raunenge wabatsira kupa mhinduro yokushora kwaSatani. (Zvirevo 27:11) Dzimwe nguva kutsungirira haisi nhau iri nyore. Zvinetso zvoutano, nhamo dzemari, kuora mwoyo, nedzimwe mhinganidzo zvinogona kuita kuti zuva rimwe nerimwe rinopfuura rive muedzo. Zvinotarisirwa kana zvichinononoka zvinogonawo kuodza mwoyo. (Zvirevo 13:12) Kutsungirira pakutarisana nezvakaoma kudaro kunotonyanya kukosha kuna Jehovha. Ndicho chikonzero nei Mambo Dhavhidhi akakumbira Jehovha kuchengeta misodzi yake “mumudziyo,” achiwedzera nechivimbo kuti: “Haizi murugwaro rwenyu here?” (Pisarema 56:8) Hungu, Jehovha anokoshesa uye anoyeuka misodzi yose nokutambura kwatinotsungirira tichichengeta kuperera kwedu kwaari. Misodzi yakadaro nokutambura zvinokoshawo mumeso ake.
Jehovha anokoshesa kutsungirira kwedu pakutarisana nemiedzo
10 Zvino, mwoyo unozvipa mhosva unogona kuramba uchapupu hwakadaro hwokukosha kwedu mumeso aMwari. Ungaramba uchingotizevezera kuti: ‘Asi kune vamwe vazhinji vane muenzaniso wakanaka kundipfuura. Ndinofunga Jehovha anogumbuka paanondienzanisa navo!’ Jehovha haaenzanisi; uyewo haana kuoma kana kuti kuva nehasha mukufunga kwake. (VaGaratiya 6:4) Anoverenga mwoyo yedu nokungwarira kukuru, uye anokoshesa zvakanaka—kunyange zviduku zvacho.
Jehovha Anopepeta Zvakanaka Muzvakaipa
11. Tingadzidzei pamusoro paJehovha kubva mumabatiro ayo akaita nhau yaAbhija?
11 Chechitatu, Jehovha sezvaanotinzvera, anonyatsopepeta, achitsvaka zvakanaka. Somuenzaniso, apo Jehovha akapikira kuti dzinza roumambo rose raMambo Jerobhoami raizourayiwa, akarayira kuti mumwe wevanakomana vamambo wacho, Abhija, avigwe zvakanaka. Nei? “Nokuti maari makawanikwa chinhu chakanaka chakafadza Jehovha Mwari waIsraeri.” (1 Madzimambo 14:1, 10-13) Jehovha naizvozvo akapepeta mwoyo womurume muduku iyeye ndokuwana “chinhu chakanaka” imomo. Zvisinei nokuti chakanaka ichocho chakanga chiri chiduku kana kuti chisingakoshi zvakadini, Jehovha akachiona chakakodzera kuchinyora muShoko rake. Akatochikomborera, achiratidza mwero wakakodzera wengoni kumunhu mumwe iyeye womuimba yakaramba kutenda.
12, 13. (a) Zvakaitika kuna Mambo Jehoshafati zvinoratidza sei kuti Jehovha anotsvaka zvakanaka zviri matiri kunyange patinotadza? (b) Pamusoro pemabasa edu akanaka nounhu, Jehovha anoita sei soMubereki ane rudo?
12 Mumwe muenzaniso wakatonaka ndewaMambo Jehoshafati akanga akanaka. Apo mambo wacho akaita zvoupenzi, muprofita waJehovha akamuudza kuti: “Nokuda kwechinhu ichi Jehovha akutsamwirai.” Ipfungwa inopengenutsa chaizvo! Asi shoko raJehovha harina kugumira ipa- po. Rakaenderera mberi richiti: “Kunyange zvakadaro zvimwe zvinhu zvakanaka zvakawani- kwa kwamuri.” (2 Makoronike 19:1-3) Naizvozvo hasha dzakarurama dzaJehovha hadzina kumudzikatidza kuona zvakanaka zvaJehoshafati. Jehovha akasiyana nokure nevanhu vasina kukwana! Kana tikagumburwa nevamwe tingave netsika yokuita setisingaoni zvakanaka zviri mavari. Uye patinotadza, kuora mwoyo, kunyadziswa, uye kuva nemhaka kwatinonzwa kungatitadzisa kuona zvakanaka zviri matiri. Zvisinei, yeuka kuti kana tikapfidza zvivi zvedu toedza zvakaoma kusazvidzokorora, Jehovha anotikanganwira.
13 Jehovha sezvaanokupepeta, anorasa zvivi zvakadaro, kungofanana nezvinoita mu- nhu anosefa ndarama anorasa mavhu asi- na basa. Zvakadini nounhu hwako hwaka- naka nemabasa? Aa, izvi ndizvo “zvinokosha” zvaanochengeta! Wati wambocherechedza here nzira iyo vabereki vane rudo vanokoshesa nayo izvo vana vavo vanodhirowa kana kuti basa ravanoita rokuchikoro, dzimwe nguva kwemakumi emakore pashure pokunge vana vazvikanganwa? Jehovha Mubereki ane rudo kupfuura vose. Chero bedzi tikaramba takavimbika kwaari, haambokanganwi mabasa edu akanaka nounhu. Kutaura chokwadi, aizokuona sokusarurama kukanganwa izvi, uye haambovi asina kururama. (VaHebheru 6:10) Anotipepetawo neimwe nzira.
14, 15. (a) Nei kusakwana kwedu kusingambotadzisi Jehovha kuona zvakanaka zviri matiri? Ipa muenzaniso. (b) Jehovha achaitei nezvinhu zvakanaka zvaanowana matiri, uye anoona sei vanhu vake vakatendeka?
14 Jehovha haangotarisi kusakwana kwedu chete uye anoona zvatinogona kuita. Somuenzaniso: Vanhu vanofarira mifananidzo yokudhirowa vanotambudzika kuti vagadzirise mifananidzo inenge yakanganisika kana kuti zvimwe zvigadzirwa. Somuenzaniso, muNational Gallery yokuLondon, England, apo mumwe munhu akanga ane pfuti akaparadza mufananidzo waLeonardo da Vinci unokosha mamiriyoni anenge 1 800 emadhora, hapana akamboti sezvo mufananidzo wacho wakanga wakanganiswa waifanira kuraswa. Kubatanidza basa rounyanzvi rave nemakore anenge 500 kwakatanga kuitwa nokukurumidza. Nei? Nemhaka yokuti rakanga richikosha mumeso evanofarira zvokudhirowa. Iwe haukoshi kupfuura mufananidzo wechoko nemazimbe here? Mumeso aMwari zvechokwadi unokosha—zvisinei nokuti ungava wakakuvadzwa zvakadini nokusakwana kwawakaberekwa nakwo. (Pisarema 72:12-14) Jehovha Mwari, Musiki ane unyanzvi wemhuri yevanhu, achaita zvinodiwa kuti adzorere kukukwana avo vose vanoteerera paanovaratidza rudo.—Mabasa 3:21; VaRoma 8:20-22.
15 Hungu, Jehovha anoona zvakanaka zviri matiri zvatingatadza kuona. Uye sezvatinomushumira, achaita kuti zvakanaka zvikure kusvikira takwana pakupedzisira. Pasinei nokuti nyika yaSatani yakatibata sei, Jehovha anokoshesa vashumiri vake vakavimbika sevanodiwa, kana kuti vanokosha.—Hagai 2:7.
Jehovha Anonyatsoratidza Rudo Rwake
16. Ndohupi huri uchapupu hukuru pane hwose hwokuti Jehovha anotida, uye tinoziva sei kuti chipo ichi ndechedu isu pachedu?
16 Chechina, Jehovha anoita zvakawanda kuratidza rudo rwake kwatiri. Chokwadi, chibayiro chorudzikinuro chaKristu ndiyo mhinduro inogutsa pane dzose kunhema dzaSatani dzokuti hatikoshi kana kuti hatidiwi. Hatifaniri kumbokanganwa kuti rufu runorwadza urwo Jesu akatambura padanda rokutambudzira uye kunyange marwadzo makuru ayo Jehovha akatsungirira pakutarisa Mwanakomana wake anodiwa achifa uchapupu hwokutida kwavo. Zvinosuruvarisa kuti vanhu vazhinji vanozviwana zvakaoma kudavira kuti chipo ichi chakaitirwa ivo pachavo. Vanonzwa vasingakoshi. Zvisinei, yeuka kuti muapostora Pauro akanga ambotambudza vateveri vaKristu. Asi akanyora kuti: “Mwanakomana waMwari, akandida akazvipa nokuda kwangu.”—VaGaratiya 1:13; 2:20.
17. Jehovha anotiswededza kwaari nokuMwanakomana wake munzirai?
17 Jehovha anoratidza rudo rwake kwatiri nokutibatsira somunhu akazvimirira kushandisa kubatsira kwechibayiro chaKristu. Jesu akati: “Hapana munhu angagona kuuya kwandiri kana Baba, vakandituma, vakasamukweva.” (Johani 6:44) Hungu, Jehovha pachake anotiswededza pedyo noMwanakomana wake netariro youpenyu husingaperi. Sei? Nebasa rokuparidza iro rinoitwa kwatiri somunhu mumwe nomumwe, uye nomudzimu mutsvene wake, uyo Jehovha anoshandisa kutibatsira kunzwisisa nokushandisa chokwadi chomudzimu pasinei nezvatisingagoni nokusakwana kwedu. Naizvozvo Jehovha anogona kutaura nezvedu sezvaakataura nezvevaIsraeri kuti: “Ndakakuda norudo rusingaperi, naizvozvo ndakakukweva nounyoro.”—Jeremia 31:3.
18, 19. (a) Ndeipi nzira yapedyo zvikuru iyo Jehovha anoratidza nayo rudo rwake kwatiri, uye chii chinoratidza kuti anotarisira izvi iye pachake? (b) Shoko raMwari rinotipikira sei kuti Jehovha muteereri anonzwira tsitsi?
18 Pamwe ndiko kuburikidza neropafadzo yomunyengetero patinonzwa rudo rwaJehovha nenzira yapedyo zvikuru. Bhaibheri rinotikurudzira tose kuti “rambai muchinyengetera” kuna Mwari. (1 VaTesaronika 5:17) Anoteerera. Anotonzi “Vokunzwa munyengetero.” (Pisarema 65:2) Haana kupa basa iri kune mumwe munhu, kwete kunyange Mwanakomana wake pachake. Pafunge: Musiki wezvinhu zvose anotikurudzira kuti titaure naye mumunyengetero takasununguka. Uye muteereri worudzii? Asina ushamwari, asina tsitsi, asina hanya here? Nyangwe.
19 Jehovha anonzwira tsitsi. Tsitsi chii? Mumwe muKristu akatendeka akura akati: “Tsitsi zvinoreva marwadzo ako ari mumwoyo mangu.” Jehovha ane zvaanonzwa here pamusoro pemarwadzo edu? Tinoverenga pamusoro pokutambura kwevanhu vake vaIsraeri kuti: “Pakutambudzika kwavo kwose naiyewo wakanga achitambudzika.” (Isaya 63:9) Jehovha haana kungoona kutambudzika kwavo chete; akanzwira vanhu vacho tsitsi. Kuti anonzwa zvakadzama sei kunoratidzwa nemashoko aJehovha pachake kuvashumiri vake okuti: “Nokuti unokugunzvai imi, unogunzva mboni yeziso” rangu. * (Zekaria 2:8) Izvozvo zvaizorwadza zvisingatauriki! Hungu, Jehovha anotinzwira tsitsi. Patinorwadziwa, iye anorwadziwawo.
20. Kufungai kusina kudzikama kwatisingafaniri kuita kana tichizoteerera zano riri pana VaRoma 12:3?
20 Hapana muKristu akadzikama angashandisa uchapupu hwakadaro hworudo rwaMwari nembiri sechikonzero chokudada kana kuti kuzvikudza. Muapostora Pauro akanyora kuti: “Nomutsa usina kufanirwa wandakapiwa ndinoudza munhu wose aripo pakati penyu kuti asazvifunge zvikuru kupfuura zvakafanira kufunga; asi afunge kuti ave nepfungwa dzakanaka, mumwe nomumwe sokugoverwa kwaakaitwa chiyero chokutenda naMwari.” (VaRoma 12:3) Imwe shanduro yeBhaibheri inoti pano: “Ndinoti kune mumwe nomumwe wenyu asazvitora seanokosha kupfuura zvaari chaizvo, asi anofanira kuzviyera zvakakodzera.” (A Translation in the Language of the People, naCharles B. Williams) Naizvozvo kunyange zvazvo tichidziyirwa norudo rwaBaba vedu vokudenga, ngative nepfungwa dzakanaka toyeuka kuti hatina kufanira kana kukodzera kudiwa naMwari.—Ruka 17:10.
21. Inhema dzipi dzaSatani dzatinofanira kuramba nguva dzose, uye tinofanira kuramba tichisimbisa mwoyo yedu nechokwadi chipi chaMwari?
21 Mumwe nomumwe wedu ngaaite zvose zvaanogona kuramba nhema dzaSatani dzose, kusanganisira nhema dzokuti hatikoshi kana kuti hatidiwi. Kana zvawakasangana nazvo muupenyu hwako zvakakudzidzisa kuti uzvione souri mhinganidzo yakaoma kunyange kuti rudo rukuru rwaMwari ruikunde, kana kuti mabasa ako akanaka seasina maturo zvokuti kunyange maziso ake anoona zvose atadze kuaona, kana kuti zvivi zvako sezvakakurisa zvokuti kunyange kufa kwoMwanakomana wake anodiwa hakuzvifukidzi, wakadzidziswa nhema. Ramba nhema dzakadaro nomwoyo wako wose! Ngatirambe tichisimbisa mwoyo yedu nechokwadi chakataurwa mumashoko aPauro akafuridzirwa okuti: “Nokuti ndine chokwadi kuti rufu kana upenyu kana ngirozi kana hurumende kana zvinhu zviripo zvino kana zvinhu zvichauya kana masimba kana kukwirira kana kudzika kana chimwe chinhu chakasikwa hazvikwanisi kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu.”—VaRoma 8:38, 39.
^ ndima 6 Bhaibheri rinoramba richibatanidza tariro yorumuko nendangariro yaJehovha. Murume akatendeka Jobho akati kuna Jehovha: “Haiwa! . . . Munditemere nguva yakatarwa, yamungandirangarira nayo.” (Jobho 14:13) Jesu akataura nezvokumutswa kwe“vose vari mumakuva ekurangaridza.” Izvi zvakanga zvakakodzera nokuti Jehovha anorangarira zvakakwana vakafa avo ari kuronga kuzomutsa.—Johani 5:28, 29.
^ ndima 19 Dzimwe shanduro dzeBhaibheri pano dzinopa pfungwa yokuti munhu anobata vanhu vaMwari ari kubata ziso rake pachake kana kuti ziso raIsraeri, kwete ziso raMwari. Kukanganisa uku kwakaunzwa nevamwe vanyori vaiona ndima iyi seinozvidza naizvozvo ndokuigadziridza. Kushingaira kwavo kwokusaziva kwakavharidzira ukuru hwetsitsi dzaJehovha pachake.
Pisarema 139:1-24 Mashoko aMambo Dhavhidhi akafuridzirwa anoratidza sei kuti Jehovha anotifarira zvikuru somunhu mumwe nomumwe?
Isaya 43:3, 4, 10-13 Jehovha anonzwa sei pamusoro pevanoshumira seZvapupu zvake, uye manzwiro ake anoratidzwa sei muzviito?
VaRoma 5:6-8 Tingava sei nechokwadi chokuti kuva kwedu vatadzi hakutadzisi rudo rwaJehovha kusvika kwatiri nokutibatsira?
Judhasi 17-25 Tingazvichengeta sei tiri murudo rwaMwari, uye zvinhu zvipi zvinorwisana nokuita kwedu kudaro?